Norwich City Oo Garoonkeeda Kaga Badisay Arsenal Markii Ugu Horeysay Muddo 28 Sanno Ah - jornalizem
Norwich City Oo Garoonkeeda Kaga Badisay Arsenal Markii Ugu Horeysay Muddo 28 Sanno Ah
Arsenal ayaa guuldarradii ugu horeysay ee intii loo bixiyay horyaalka Ingariiska Premier League waxa ay ku soo gaartay garoonka Carrow Road, iyadoo Norwich ay kaga badisay gool iyo waxba.
Bilowgii ciyaartaba a Arsenal waxa ay heshay fursado fiican, iyadoo goolhaya Norwich si liidata kubad u bixiyay, waxaana helay Gervinho kaasoo Podolski u sii dhigay, laakiin Martin ayaa ka horjoogsaday.
Podolski ayaa hadana daqiiqad ka dib kubad ay si fiican loo soo dhisay goolka hareermariyay.
Laakiin Norwich ayaa aheyd kooxdii hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 20aad markii goolhayaha Arsenal uu soo tufay darbo joog hoose aheyd oo ka timid Tettey, waxaana kubadii la soo tufay helay xiddiga Norwich Holt kaasoo shabaqa ku hubsaday.
Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay goolkaas ay ku hogaamineysay kooxda Norwich City.
Qeybtii labaad ayaysan wax badan isbedelin, iyadoo labada kooxoodba ay isku dayayeen inay shabaqa soo taabtaan.
Arsenal ayaana u muuqatay ciyaarta oo 10 daqiiqo dhiman inay iska dhiibeen ciyaarta markii Vermaelen uu kubad u waayay Holt oo aan aheyn ciyaaryahan orad badan, waxaana isku daygiisii uu ku doonayay inuu kubad kaga dulqaado goolhaye Mannone ay noqotay mid dhicisowday oo kubada goolhayaha ayay gacanta u gashay.
Guushaan ayaa waxa ay la micno tahay in Norwich ay gaartay guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ee Premier League.
Norwich ayaa markii ugu horeysay Arsenal kaga badisay garoonkeeda Carrow Road tan iyo 1984kii.